トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mail avy pachinko efi-trano tsy misy il?na azy eo amin'ny latabatra hisafidy
Ianao, amin'ny raharaham-barotra e-mail iray pachinko efi-trano, na dia ny afa-po ihany isaky ny, Mino aho fa mety ho maro no handray ny hafatra izay mahatsapa fa tsy tena ilaina. Ao amin'ny pachinko efi-trano, miresaka ny antony, raha Hianao no hamonjy taratasy, raha ny marina, ny tena antony dia ny hisarihana mpanjifa tanjona, tsy mailaka mba handresena mpanjifa. Eny, na dia ny lafiny natolotra teo, mba tsy misambotra ny fikasan 'ny pachinko efi-trano, ny e-mail Manantena aho indray mandeha tsy misy il?na azy ianao mahalala ny fironana hanary.
ao amin'ny orinasa e-mail ny toy izany pachinko efi-trano, misy lamina.
ao amin'ny namany Sary mba hilaza ny ady fanahy izay vonoina, faty ao amin'ny mafy amin'izao fotoana izao, dia ny mailaka mba ho mpanjifa ihany no misarika namany Sary miasa tanjona, ny farany mba ho fampahafantarana ny zava-nitranga. Ao izany, misy ny mailaka na inona na inona izay tsara indrindra ho an'ny nahazo mihitsy aza.
Izany no faharoa amin'ny mailaka hetsika mikendry afa-tsy ny natao hisarihana mpanjifa. Ao amin'ny e-mail ny toy izany anatiny, Miteny hilaza foana matetika rehefa tonga, 's ny antoandro sy ny hariva. Anisan'ireo tonga mailaka maro e-mail isan'andro, izay mety tsy mamaky ny tena, dia ny sakafo atoandro-tratra. Raha tsy misy
maraina ny fandidiana, satria matetika no mandefa, tsy miova betsaka ny maraina koa ny e-mail sy afa-po. Isika izay tanteraka namany Sary mikendry ny fandidiana ihany.
sy ny hariva dia ny e-mail, fa raha manana raharaham-barotra ara-dal?na dia efa ho fiantraikany mbamin'ny namany Sary maraina. Mba hahazo ny sitrapony mba hitsidika ao amin'ny hariva mpanjifa, dia ho any amin'ny namany Sary mba hanosika ny fitsidihana ao amin'ny hetsika vaovao, sy ny tahaka ny andro.
afa-tsy zava-nitranga lehibe, okay tsy mijery indrindra. Na izany aza, e-mail hariva ny andro dia nanao hetsika lehibe, satria misy ny tranga izay mahasoa vaovao manokana eo, azafady miezaka ny hanamarina.
ohatra, filazana, sns laharan'ny fanambarana sy ny fotoana samy hafa ny sehatra misokatra ny fanambarana sy ny andalan-teny loteria fomba lalana, mba hanan-javatra. Ankoatra izany, e-mail tsy misy dikany ny manaraka e-mail mandeha ihany no tanjona, zava-mitranga Izany dia mailaka fampandrenesana filokana.
ampy fa ny hetsika lehibe manakaiky, dia mety halefa matetika, nefa tsy manova ny tena afa-po isaky ny. Raha vao namaky, ny zavatra matetika atao eo amin'ny votoatin'ny ny azo antoka tsy mamaky mailaka nanaraka.
fampahalalana manan-danja, matetika tonga any amin'ny alina mandefa ny andro mialoha ny hetsika, dia tsy tena ilaina izany e-taona nandritra ny raharaham-barotra ara-dal?na. Raha niresaka ny toy izany tsy misy il?na azy e-namany Sary lafin-javatra ary amin'ny maraina na tsy hanova ny e-mail sy afa-po, miezaka ny boky, satria tonga ny maraina mandefa taratasy tahaka ny indray.
ihany koa satria tonga namany Sary izay mailaka isan'andro ianao, dia lasa te hampitsahatra ny lahateny, ary efa nahita ihany no tsy misy il?na azy namany Sary. Ao amin'ny namany Sary nanolotra isan'andro, ary rehefa mahatratra mail na zava-dehibe, ianao rehefa mamaky ny toerana tokony ho hita ao anatiny foana any ho any amin'ny fampiasana mahomby azo atao.